आज हङकङमा नयॅा कोरोना भाइरस संक्रमित ७ जना फेला परे - Gulmeli Online TV
३ माघ २०७८, सोमबार १५:३८
हङकङ सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शन (CHP) का डा. चुआंग शुक-क्वानले आज बिहान ११ बजेसम्म ३ आयातित केसहरू सहित कुल ७ वटा COVID-19 घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको घोषणा गरे। तीमध्ये ४ स्थानीय केसहरु थिए र हङकङमा कुल कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या हङकङमा १३ हजार ४८ पुगेको छ ।
स्थानीय केसहरु मध्ये ३ आयातित केसहरूसँग जोडिएको थियो। उनीहरु तीन जनाको परिवार हुन । तिनीहरूमध्ये एक जना केस नम्बर १९२१३ सँग नजिकको सम्पर्कमा थिए। तीन जनाको परिवारमा नर्थ प्वाइन्टको किआङ्सु-चेकियाङ कलेजमा अध्ययन गर्ने १७ वर्षीय पुरुष विद्यार्थी (केस नं.१३०५१) हुन। उनको स्कुलको अन्तिम दिन जनवरी ७ मा थियो । उनले धेरैजसो समय घरमै बिताए ।
केस नं. १३०५२ एक ११ वर्षीया महिला विद्यार्थी हुन र उनी कजवे बेको हेनेसी रोड सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा पढ्छिन। उनी पनि धेरैजसो समय घरमै बिताउने गरेकी छिन । ११ जनवरी २०२२ मा, उनी आफ्नो सहपाठीसँग दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म लकहार्ट रोडको एउटा ट्युसन सेन्टरमा गएकी थिईन। दुबैले मास्क लगाएका थिए र उनको सहपाठीले भाइरस परीक्षण गर्नुपरेको थियो।
केस नम्बर १३०५३ परिवारको ४६ वर्षीय विदेशी घरेलु सहयोगी (डोमेस्टिक हेल्पर) हो। उनी सरसफाईमा सहयोग गर्न आफ्नो रोजगारदातासँग याउ टोङका १९ वर्षीय पुरुष केस नम्बर १३०१४ को घरमा गएकी थिईन। यसैबीच परिवारका अर्का सदस्यमा पनि प्रारम्भिक परीक्षण पोजेटिभ देखिएको छ ।
दुवै विद्यालयले १४ दिनका लागि कक्षा स्थगित गर्नुपर्ने भएको छ ।
अज्ञात स्रोतहरूको अर्को स्थानीय डेल्टा भेरियन्ट केस काजवे बेको जार्डिन बजारमा रहेको लिटिल बोस को (पेट) पाल्तु पसलमा २३ वर्षीया महिला कर्मचारी (केस नं.१३०५७) हो, उनी एबरडीनको ४ टुङ सिंग रोडमा बस्छिन। उनी वस्ने भवन हिजो तालाबन्दी परीक्षण अन्तर्गत परेको थियो तर कुनै नयाँ केस फेला परेन। आज बिहान पसलमा गइन जहाँ उनी वातावरणीय नमूनाहरू संकलन गर्न र जनावरहरूको अवस्था जाँच गर्न काम गर्छिन।
यसैबीच सिल्का सीभ्यु होटलको चौथो तला र १२ औं तलाबाट ६० वटा वातावरणीय नमूना संकलन गरिएको छ । धेरै नमूनाहरू COVID-19 का लागि सकारात्मक परीक्षण गरियो र तिनीहरूमा कोठा ४१३ मा एयर प्युरिफायर, भेन्टिलेसन डक्ट र शौचालयको नल पनि संकास्पद रहेको छ।
जीनोम अनुक्रमण परिणामहरूले पुष्टि गरेको छ कि पेनीको बे क्वारेन्टाइन केन्द्रका दुई सुरक्षा गार्डहरू एउटै भाइरस संक्रमित हुन।
यसैबीच, आज २० भन्दा कम प्रारम्भिक केसहरू रेकर्ड गरियो।